ရုရှားကနေအစ္စရေးကို ၀ င်ဖို့ဘယ်စာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်သလဲ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (အနည်းဆုံး ၆ လသက်တမ်းရှိ) အပြန်အလှန်လက်မှတ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံလစာလက်မှတ်နှင့်သင်ပျံသန်းခဲ့သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူများကိုငွေပေးချေနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအတည်ပြုသောအခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုတစ်ခါတစ်ရံတောင်းခံသည်။
စပိန်နိုင်ငံအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား။ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။ တစ်ပတ်နှင့်၎င်းကိုစီစဉ်နိုင်သည့်မိတ်ဆွေကောင်းများရှေ့တွင်အနည်းဆုံးစာရွက်စာတမ်းများ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်စ်ပို့သည်အနည်းဆုံးသုံးလအကြာတွင်သက်တမ်းရှိသည်။
ငါ့လိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးဖို့လိုတယ် စာအရေးအသားကဘာလဲ Chelyabinsk ဒေသ။ Nagaybak ခရိုင်။ Ferschampenoise ၏ရွာ။ လမ်းစက်မှုလယ်ယာအိမ် ၃၈ ခန်း ၉ ခန်း။ Braer Yuri Andreevich ။ စာတိုက်ကုဒ် 38 နိုင်ငံ၊ မြို့၊
မော်စကိုမှ Kaliningrad သို့ပြန်လာသောအခါငါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါသလား။ အံ့သြစရာ Kaliningrad ဒေသနှင့်အခြားသောရုရှားနိုင်ငံများအကြားလစ်သူသမ္မတနိုင်ငံ၏ဗီဇာမရှိသောရုရှားနိုင်ငံသားများမှတစ်ကြိမ်ခရီးစဉ်အတွက် ...
Multivisa ဆိုတာဘာလဲ။ multivisa အကြောင်းကိုမင်းဖြေပြီးပြီ။ အချို့သည်လုံးဝအနတ္တကိုရေးသားခဲ့ကြသောကြောင့်၊ ကျန်မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်ဖြေပါမည်။ ) အထူးသဖြင့်သံရုံးတစ်ခု၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ မကြာခဏ ...
ဂျော်ဂျီယာကိုသွားရန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါသလား။ ... သင်လိုအပ်သည်။ သူမသည် CIS CIS အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ ရုရှားနိုင်ငံသားများသည်ဂျော်ဂျီယာသို့ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မကျော်ရန်ဝင်ရန်ဗီဇာမလိုအပ်ပါ။ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါ ...
မော်စကိုမှ ပြန်၍ Kaliningrad သို့ရထားဖြင့်သွားရန်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ အချင်းလူ၊ ရုရှားကနေရုရှားကိုသွားပြီးအကူးအပြောင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများတောင်မှပါ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်…
နာမည်အပြည့်အစုံပြောင်းပြီးပါကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။ ဒါဟာတစ်လခန့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ပေးရုရှားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ဟန်! ထိုနှစ်တွင်သူမကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
e-လက်မှတ်ဆိုတာဘာလဲ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအတွက်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုရလဲ၊ နောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်သင့်သလဲ။ အင်တာနက်မှတဆင့်ဖျော်ဖြေပွဲသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအတွက်လက်မှတ်တစ်ခုကိုသင်ပေးသည်။ ထို့နောက်လာပါ
ကျွန်ုပ်ကိုတရားစွဲဆိုမှုဖွင့်မထားကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ။ မင်းမလုပ်နိုင်ဘူး .... အဲဒီမှာပြည်ထဲရေး ဦး စီးဌာနကိုသွားပြီး၊ ငါရုံးတင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးနာမည်ကဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ အကယ်၍ …
ရုရှားမီးရထား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့် အချိန်မှစ၍ အီလက်ထရွန်နစ်လက်မှတ်များရောင်းချခြင်းစတင်သနည်း။ ၇-၄၀ မော်စကိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ site ကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ အဲဒါက ၈ နှစ်မပြည့်သေးပေမဲ့လက်မှတ်တွေရောင်းနေတုန်းပဲ။ ပုံမှန်လက်မှတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။
dekatop.com အရကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျွန်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျွန်း ၁၀ ကျွန်း ကျွန်းသည်သဘာဝဇာတိနယ်မြေဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဝိုင်းရံထားသည်။
အီတလီကိုဗီဇာရဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ? အကယ်၍ သင်ကကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုနှင့်သံရုံးတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ရောက်နေလျှင်ဗီဇာထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်သုံးရက်ကြာမည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြင့်ဆုံးလို့ပြောတယ်
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းခရီးစဉ်ပျံသန်းမှုလက်မှတ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ သင်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ကိုအတိအကျမသိပါကပြန်ဖွင့်သည့်နေ့စွဲဖြင့်လက်မှတ်ဝယ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ဖွင့်သည် ...
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ယူကရိန်းသို့သွားရန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါသလား။ ဟုတ်ပါသည်၊ ရုရှားလူမျိုးများသည်ယူကရိန်းသို့ဝင်ရောက်ရန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါသည်။ ယူကရိန်းကိုသွားဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
vyborg ovir ၏အဖွင့်နာရီ။ နိုင်ငံခြားပတ်စ်ပို့မှတ်ပုံတင်ခြင်း OVIR မဟုတ်တော့ FMS ဖြစ်သည်။ ခေါ်ဆိုပါ၊ ရှာဖွေပါ။ Vyborgsky ခရိုင်၏ Vyborg, st ။ Travyanaya, 26 (81378) 508-11, 8- (813-78) -5-07-63 http://vbgcity.ru/?q=ru/node/3583 အလုပ်စည်းမျဉ်းများနိုင်ငံခြားသို့ ...
ကလေးများ၏မီးရထားလက်မှတ်များသည်အဘယ်မျှအသက်ကြီးပြီးအရွယ်ရောက်သူများထက်မည်မျှရာခိုင်နှုန်းစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းနိုင်သနည်း။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအစိုးရ၏ ၂၀၀၅ မတ်လ ၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သောအမိန့်ကို အခြေခံ၍ ကလေးငယ်များသယ်ဆောင်ရန်အတွက်နည်းဥပဒေ ၁၁၁ "...
Aeroflot e-လက်မှတ်ကိုပုံနှိပ်နည်း။ လက်ခံရရှိထားသော Aeroflot ဖိုင်ကိုကုမ္ပဏီရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားသောရုံးခန်းမှဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုသောဆပ်ပြာမှဖြစ်စေ PRINTER ... သို့ပို့ပါ။ flush ...
ဟယ်လို! အမေရိကန်ဗီဇာအတွက်ကောင်စစ်ဝန်ကိုဘယ်မှာပေးရမလဲ။ ဘဏ်မှငွေသားထုတ်ယူခြင်းလျှောက်လွှာရှင်တစ် ဦး စီသည် Raiffeisen Bank ၏မည်သည့်ဌာနခွဲတွင်မဆိုကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးရပါမည်။ ငွေပေးချေမှုကိုငွေသားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဘဏ်မှာမင်းဖြည့်ရမယ် ...
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,658 စက္ကန့်ကျော် Generate ။